Material mizara tsara Fitaovana
Battery Pack TOSIKARATRA : 24V, 36V, 48V, 72V
Applications : Aerial sehatra asa, Floor fikarakarana milina, Golf sarety, Andrandrao kamiao sy Utility fiara. Tonga antsika ho amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
AODI QC Series dia manerana izao rehetra izao HF / PFC maty new-dovia amin'ny famolavolana fanariana tena mateza sy tantera-drano izay miasa eo amin'ny dingana rehetra iray-Grid maneran-tany amin'ny 96% tampon'isan'ny fahombiazana. Mihoatra ny 10 mamaly ny mombamomba fitehirizana amin'ny nandroso bokotra sy ny mifamadika multifunction LED miseho.
Golf ny hovidiana Battery Charger